त्रिशुली बस दुर्घटनाअपडेट : को को को थिए थिए त यात्रु नामावली सहित ? – Samatal Online
त्रिशुली बस दुर्घटनाअपडेट : को को को थिए थिए त यात्रु नामावली सहित ?
सर्लाही साउन २४ । त्रिशुलीमा खसेको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ३ जनाको पहिचान खुलेको छ । दुर्घटनामा परी सर्लाही ब्रहम्पुरी गाउँपालिका–४ का राजनारयाण रौनियार, उनकी श्रीमती शोभा रौनियार, भतिजा सौरव रौनियारको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।